Soomaaliya iyo Koonfur Afrika oo hashiis kala saxiixday – Balcad.com Teyteyleey
Soomaaliya iyo Koonfur Afrika oo hashiis kala saxiixday
Wafti ka socda wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya oo jooga dalka Koonfur Afrika ayaa heshiis kala saxiixday kusaabsana isku dhafna ciidamada, wadashaqaynta amaanka , iyo in dowladda federaalka laga caawiyo Dastuurka iyo Ha’yadaha Amaanka.
Agaasimaha wasaaradda Gaashandhiga ayaa sheegay in heshiiskaas uu ahaa mid muhiim u ah dalka, waxbadana ay ka barteen, isagoo hadalkiisa ku daray inay heshiis kale kala saxiixan doonaan labada dowladood.
Wasiirki hore wasaaradda Gaashandhiga hadana ah Guddoomiyaha Guddiga Difaaca, Xuseen Carab Ciise oo kamid ah waftiga Koonfur Afrika jooga ayaa dhankiisa tilmaamay in heshiisku uu yahay mid loo baahan yahay, islamarkaana ay rajaynayaan in labada dowladood kawada shaqayn doonaan heshiiskaas.
The post Soomaaliya iyo Koonfur Afrika oo hashiis kala saxiixday appeared first on Ilwareed Online.
Gudoonka Baarlamaanka Hirshabelle oo Aqbalay Mooshinkii Madaxweyne Cosoble (Akhriso)